Belgium: Fanny Appes, wakporo ụgbọ oloko na Linkebeek: onye ya na ya na-eme egwuregwu gọrọ agọ eziokwu - TELES RELAY
Belgium: Fanny Appes, wakporo ụgbọ oloko na Linkebeek: onye mụ na ya na-eme egwuregwu gọrọ eziokwu.
Fanny Appes, wakporo ụgbọ oloko na Linkebeek: onye bụbu onye na-eme egwuregwu gọrọ agọ eziokwu
Enyi-enyi ya nwoke nke nọ n'ụgbọ ahụ wakporo Fanny Appes ka ọ na-aga ọrụ. O tinyela akwụkwọ mkpesa ọnwa ole na ole gara aga maka eziokwu ndị yiri ya.
JMorningtụtụ Tọzdee, Fanny Appes nọ mwakpo nke ya bụbu- ibe n'ime ụgbọ oloko na ụzọ ọ na-arụ ọrụ. Ọ gbara akwụkwọ mkpesa ọnwa ole na ole gara aga, kwa izu gara aga, enyi ya ochie nwaa ịnọkpe jiri ụgbọ ala ya kpuchie ya.
Na mgbede Fraị a, Sud Info na-akọ na onye ya na ya bi na mbụ, Xavier B. na-agọnarịrị eziokwu: “Ọ na-ewute iwe ya mana ọ bụghị m kpatara ya. Achọrọ m ịgakwuru ndị uwe ojii France wee nweta onye ọka iwu. Agaghị m etinye akwụkwọ mkpesa megide ọnọdụ ọ bụla. Anaghị m achọ ka m mata ihe m na-agabiga ugbu a. Achọrọ m ka ihe niile gaziere ya… ”.
N’oge gara aga n’ụbọchị, o nwere Ndị uwe ojii kwara m emo Onye Belgium na Facebook.
Isiokwu a pụtara na mbụ http://www.lesoir.be/280093/article/2020-02-14/fanny-appes-agressee-dans-un-train-linkebeek-lex-compagnon-de-lathlete-nie-les
India: CBI chọrọ mgbapụta maka inye onyinye nke Lalu, SC na-arịọ nzaghachi | Akụkọ India
Onye isi ala Prince Andrew: ọkachamara gosipụtara ihe kpatara Meghan na Harry ji egwu ịgba egwu ụbọchị ọmụmụ Duke